Mpiray amin’ny fomban’i Kristy
Ary izany no nahatanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soa no lehibe indrindra, mba ho tonga mpiray amin’ny fomban’Andriamanitra amin’izany hianreo, rehefa afa-nandositra ny fahalotoana izay eo amin’izao tontolo izao noho ny filana. 2 Pet. 1:4
Hatsaran-toetra manao ahoana re no namirapiratra teo amin’ny fiainan’i Kristy andavanandro e! Izy no tsy maintsy ohatra arahintsika. Misy asa lehibe tsy maintsy atao eo amin’ny famolavolana toetra hanahaka ny toetran’Andriamanitra. Tsy maintsy tefen’ny fahasoavan’i Kristy ny tena iray manontolo, ary tsy ho tanteraka ny fandresena raha tsy efa mahita fahalemem-panahy sy fitiavana mahazatra tahaka ny an’i Kristy ary fihetsika masina eo amin’ny fitondran-tenan’ny zanak’Andriamanitra ny tontolon’ny lanitra iray manontolo.
Tsy maintsy manao fanandramana ho an’ny tenany ny olona tsirairay. Tsy misy olona afaka ny hiankina amin’ny fanandramana na fahazaran’ny olon-kafa eo amin’ny famonjena. Tsy maintsy mifankazatra amin’i Kristy tsirairay avy isika, mba ahazoantsika maneho Azy araka ny tokony ho izy eo amin’izao tontolo izao. “Efa nomen’ny herin’Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an’Andriamanitra amin’ny fahalalana Ilay niantso antsika tamin’ny voninahiny sy ny fahatsarany” (2 Pet. 1:3). Tsy misy na dia iray amintsika afaka manala tsiny ny toetrantsika mirehadrehatra, ny toetrantsika meloka, ny fitiavan-tenantsika, ny fitsiriritana, ny fialonana , na ny fahalotoan’ny fanahy, vatana, na ny saina (...)
Tsy maintsy mianatra amin’i Kristy isika. Tsy maintsy fantatsika hoe inona ho an’ireo navotany Izy. Tsy maintsy tsapantsika fa , amin’ny finoana Azy, dia tombontsoantsika ny ho mpiray amin’ny fomban’Andriamanitra, ka handositra ny fahalotoana izay eo amin’izao tontolo izao noho ny filana. Amin’izay dia ho voadio amin’ny fahotana rehetra sy amin’ny kileman-toetra rehetra isika. Tsy ilaintsika ny mihazona fironana ho amin’ny fahotana na dia iray aza.
Rehefa miray amin’ny fomban’Andriamanitra isika, dia hiala amin’ny toetrantsika ny tarazo sy ny fironana novolena ho amin’ny tsara isika. Rehefa mianatra amin’ilay Mpampianatra avy amin’Andriamanitra mandrakariva sy miray amin’ny fombany isan’andro isika, dia miara-miasa amin’Andriamanitra mba handresy ireo fakam-panahy apetraky Satana. Miasa Andriamanitra, ary miasa koa ny olona, amin’izay dia afaka ny ho iray amin’i Kristy io olona io, tahaka ny maha iray an’i Kristy amin’Andriamanitra. Rehefa izay dia miara-mipetraka amin’i Kristy any an-danitra isika. Miala sasatra ao anatin’ny fiadanana sy fahatokiana an’i Jesosy.